Doorashadii Aqalka Hoose: Xor & Xalaal Mise Xaaraam Aan Horay loo Arag? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Doorashadii Aqalka Hoose: Xor & Xalaal Mise Xaaraam Aan Horay loo Arag?
November 12, 2016 - By: Omar Akhyaar
Caasimadda Puntland ee Garoowe, waa 13 Bishan Nofeember ka bilaabanaya Wajiga Labaad ee Doorashadda Xubnaha aqalka hoose ee Barlamaanka Federalka Soomaliya, waxaana lagu tartamay 7 kursi oo labo ka mid ah ay dumar kaliya ku tartamayaan.
Bal marka hore aynu dib u jaleecno oo sawir guud aan idinka siiyo wajigii kowaad ee doorashadii dhacday 5tii iyo 6dii bishan Nofoober 2016 oo lagu tartamayay 12 Kursi, oo ay isu soo sharaxeen in kabadan 30 qof oo ka kala socday goboladda Bari, Karkaar, Nigaal iyo Gobolka Sanaag.
Musharixiinta tartamayay waxay isugu jireen Xildhibaano ka tirsan Barlamaankii hore, kuwa ka mid ahaa golaha wasiiradda Puntland, Ganacsato, dhalinyaro, Macalimiin Jaamacadeed, rag lagu eedeeyay in howlo sharci darro ah ay gacanta kula jiraan, qaar dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax u soo qabtay iyo qaar kale oo badan.
Doorashada waxaa lagu qabtay 5 Xarumood oo ku dhex yaal dhismayaasha Jaamacadaha Bariga Afrika iyo Jaamacadda PSU ee Garoowe, kuwasoo hoolkiiba loo diyaariyay kuraas tiradoodu aysan ka badnayd 80 Kursi oo 51 ka mid ah loogu talagalay ergada wax dooranaysa, qaybta kalena loo diyaariyay musharixiinta, guddiga doorashadda, howlwadeenadda doorashadda, korjoogtada iyo martisharafta kale ee loogu talagalay inay la socdaan doorashadda.
Goobta doorashadda waxaa lagu diyaariyay sanduukha codaynta, waraaqaha codaynta iyo qol yar oo ka samaysan kartoon oo loogu talagalay in codeeyuhu adeegsado si qarsoodi ah, marka uu u codaynayo musharax §, waxaa kaloo lagu soo diyaariyay goobta Kunbuyuutar, Daabace iyo qalab kale oo loo adeegsanayay doorashadda.
Codaynta Doorashadda waxa ay bilaabatay abaarihii 9;00 subaxnimo, waxaana lagu bilaabay Labo musharax oo ka soo jeeda gobolka Nugaal oo kala ahaa Cali Yuusuf Cali xoosh oo hore u soo noqday Wasiirk K/xigeenkii Wasaaradaha arrimaha Gudaha Puntland xiligii Maamulkii Faroole, waxaa la tartamaya C/rashiid Xasan Yuusuf Cali Xoosh.
Cali Yuusuf Xoosh waxaa u codeeyay 49 Ergay, halkii ninkii la tartamayayna uu helay cod kaliya, codaynta ka dib Cali oo la waydiiyay waxaa la micno tahay inuu wareegii kowaad 49 cod helo oo si aqlabiyad ah uu ugu guulaysto kursiga, wuxuu sheegay inuu yahay siyaasiyi la jecel yahay, isaguna dadka jecel.
Labada musharax ee ku tartamayay kursiga Beesha Ciise Maxamuud /Muuse Ciise waa Wiil iyo Adeerkiis, waxayana taasi abuurtay in xubnaha kale oo ka tirsan beeshu ay ka biyo diidaan oo ka soo horjeestaan iyagoo codsaday in kursiga loo tartamo oo uu noqdo mud furan, waxayna codsadeen in ay la tartanto Sureer Abshir Muuse oo ah haweenay aqoonyahanad ah, hase yeeshee waxaa is-hortaagay Guddiga Doorashadda iyo xubno kale oo beesha xubintu ka tartamaysay.
Kursiga Beesha Cali Saleebaan.
Kursiga Waxaa ku tartamay saddex musharax oo kala ahaa Maxamuud Xayir Ibraahim oo hadda ah Wasiir k/xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Fedraalka iyo Xildhibaan ka tirsan Baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday, Cabdisamad Yuusuf Maxamed oo loo yaqaan Abwaan oo hore u soo noqday Wasiirkii Ganacsiga ee Maamulka Puntland dowladii Cadde Muuse iyo Cabdixaafid Cali Yuusuf oo horay u soo noqday Guddoomiyihii Gobolka Bari . Tartankan ayaa ahaa mid furan oo la isugu awood sheegtay khibradda xilka, Awooda lacageed iyo xiriirka ay la leeyihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay in kursigan uu ahaa midkii ugu qaalisanaa marka loo eegto lacagaha la kala qaatay, ololaha muddada dheer socday iyo iyadoo mararka qaarkood ay tegtay gacan ka hadal dhex maray dadkii soo xulayay ergooyinka iyo taageeryaasha musharixiinta qaarkood oo aan ku qanacsanayd qaabka loo soo xulay ergada iyagoo sheegay in musharax gaar ah loo xulay.
Inkastoo ay arrimhaasi oo dhami jireen, haddana codbixintu waxay u dhacday si wanaagsan, Musharax Maxamuud Ibraahim Xayiri wuxuu helay 37 Cod, Halka C/samad Yuusuna uu helay 12 Cod oo kaliya, iyada musharax Cabdixaafid Cali Yuusufna uu helay 2 cod oo kaliya, Taasi oo guushu ku raacday Maxamuud Xayiri Ibraahim.
Kursiga Beesha Warsengali/ Ugeyslabe
Kursigan Waxaa ku tartamayay labo musharrax oo kala ah Siciid Daahir Ismaaciil Bootaan oo oo magaciisa (Xarakiga) ama siyaasada loogu yeero Muuse Axmed Ismaaciil, wuxuuna ka mid ahaa Xidhibanaadii waqtigoodu dhammaaday, waana ganacsade laga yaqaan Soomaaliya. Waxaa la tartamaysay Amaal ibraahin Ismaaciil Bootaan, oo Magaca ay tartanka ku gashay uu ahaa Faadumo Ismaaciil Bootaan.
Mushurax Muuse wuxuu kaga guulaystay gabadhii la tartamaysay oo ay ilma adeer ay yihiin wareegii kowaad isagoo 44 cod, halka ay heshay 7 cod oo kaliya.
Musharaxan wuxuu kaga duwanaa musharixiinta kale, isagoo caasimadda Garoowe yimid 12 Saac ka hor xilligii doorashada lagu ballamay inay dhacdo, isagoo isla waqtii uu yimid la kulmay Ergadii dooranaysay oo loo sii diyaariyay oo deganayd guri isaga u kiraysnaa oo ku yaalay jidka 30ka ee Garoowe, waxaa kaloo muuqanaysay in isla qofka la tartamayay uu isagu soo sharaxay, islamarkaana bixiyay lacagtii fee-ga doorashada oo ahayd 2,500 dollar.
Musharaxan wuxuu kaloo kaga duwanaa yahay musharixiint kale, wuxuu ka mid ah Ganacsato iyo siyaasiyiin ay Monitoring Group ku eedaysay inuu ka ganacsdo waxyaabo sharci darro ah oo dalka uu soo galiyo, taas oo sabab u ah in uu adeegsado magic aan ahayn magaciisa saxda ah.
Kursiga Beesha Warsengali/ Bah-majeerteen.
Sidoo kale kursigaan waxaa isagana ku tartamayey labo musharrax oo kala ah Axmed Ismaaciil Maxamed Shire Cabdalle oo loo yaqaano “Xaaji Ismaaciil” oo isaguna hore uga tirsanaa Xildhibaanadii waqtigoodu dhammaaday iyo Iimaan Maxamed Cashuur Cabdalle oo Adeer u ah Xaaji Ismaaciil isla markaana uu isagu soo sharraxay kana bixiyey lacagta Fee-ga ah ee dhammayd $5,000.
Xildhibaan Axmed Ismaaciil Maxamed waxa uu kala mid ahaa Xildhibaan Muuse Axmed Ismaaciil Ergada dooranaysa isaga ayaa gacantiisa kusoo qortay, ninka la tartamayana isaga ayaa soo sharraxay
Beesha warsangeli ayaa cabashadooda usoo gudbiyey guddiyada doorashooyinka dadban ee heer Federaal iyo Heer Maamul goboleed iyo guddiga khilaafaadka balse taa beddelkeeda guddiyadaasi dheg uma jalaqsiin.
Kursiga Beesha Warsengali/ Dubays
Inkastoo Beesha Dubays ee Warsangeli ay labo kursi oo aqalka hoose ee Barlamaanka federaalka ay ku leeyihiin, haddana guusha Musharax Daahir Xaaji Geelle Faarax oo 46 cod kaga guulaystay musharixiin la tartamayay oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Abees , waxay dhaliysay buuq iyo qaylo markii tiro labo jeer ka badan la bedelay ergadii codayn lahayd, taasi oo sababtay in ergadii kowaad ee la diiwaangaliyay ay warbaahinta la hadleen oo ay sheegeen inay ka baxeen doorashadda iyagoo sheegay in guddiga doorashadu ay diideen inay warqada aqoonsiga musharax ay siiyeen musharixiin isla beesha ka soo jeeday, kuwasoo la tartami lahaa Daahir.
Ergooyinka cabanayay waxay sheegeen in halkii laga jawaabi lahaa cabashadooda ay Guddiga Doorashooyinkii ay diwaangaliyaan Ergay Cusub 12 Saac ka hor xiligii ay doorashadu la qaban lahaa, laguna bedelay ergooyin kale oo uu musharuxu soo qortay, Waxayna ku eedeeyay guddiga inay laaluusha ka qaateen musharaxa
Beelaha Kuraastooda Lagu Tartamayay
Kursiga Beesha Majeerteen/Siwaaqroon.
Kursigan waxaa ku tartamayay 5 musharax oo isugu jiray rag dhalinyaro ah, aqoonayahno muddo dheer soo shaqaynayay iyo rag wasiiro ka soo noqday Puntland iyo Dowladda Federaalka, Waxaana la oran karaa waa kursiga kaliya ee si furan oo hufan loogu tartamayay oo aysan ku jirin farogalin iyo cadaadiska siyaasiyiinta.
Waxaa ku tartamayay C/naasir Siciid Muuse oo ah aqoonyahan hormuud ka ahaa kulliyadda Maamulka iyo Maaraynta ee Jaamacadda Barriga Afrika, C/raxmaan Xaaji Biishkolo oo ah aqoonyahan,horena u soo noqday Wasiirkii beeraha iyo waraabka Puntland. Waxaa kaloo tartamayay C/raxmaan Maxamuud Bangax oo hore u soo noqday Xildhibaan, Wasiir Puntland iyo dowladda Federaal, sidoo kale waxaa tartamayay C/laahi Maxamed Ciise oo ah aqoonyahan muddo dheer soomaaliya ka shaqaynayay iyo Ganacsade Maxamed Siciid Saalax
Kursiga waxaa ku guulaystay C/naasir Siciid Muuse oo helay 26 Cod, Halka musharixii ku xigay uu helay 17 Cod. C/raxmaan Bangax wuxuu helay 3 cod, Iyadoo musharax Biishkalo uu helay 2 cod iyo Hal cod uu helay Aqoonyahan Cabdullaahi Maxamed Ciise.
Kursiga Beesha Madhibaan.
Afar musharax ayaa ku tartamayay kursiga beesha Madhibaan, waxyana kala ahaayeen Cilmi Cumar Cilmi, Sakariye Khaliif, Axmed Cabdi Bel iyo C/raxmaan Axmed Maxamed. musharixiintan qaarkood dad si weyn looga yaqaan degaamadda Puntland, Musharax Cilmi uu muddo dheer u soo shaqaynayay wasaaradda Maaliyadda Puntland, isagoo hadda ah xoghaynta Wasiir k/xigeenka Maaliyadda Puntland, Halka Sakariye khaliif uu yahay suxufi u soo shaqeeyay idaacada SBC, Telefishanka Universal iyo waqtiga uu ka tirsan yahay Xafiiska Warfaafinta ee Madaxtooyadda Dowladda Puntland.
Kursiga Waxaa ku guulaystay Cilmi Cumar Cilmi oo helay 28 Cod, halka mushariixii ku xigayna uu helay 22 Cod,.
Kurisga Beesha Yibraha.
Kursigan wuxuu tartankiisu u dhexeeyay C/naasir Maxamed oo ahaa Wasiir K/xigeenka Wasaaradda Amniga Federaalka iyo Xildhibaan, Cabdirashiid Maxamuud Xasan, iyo Sheekh Shamsudiin Makaawi, Waxaana ku guulaystay markii codadkii la tiriyay Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo helay 27 cod, halka uu C/naasir uu helay 22 Cod oo kaliya, iyadoo musharax Saddexaad uu helay 2 cod oo kaliya.
Musharax ku guulaystay kursigan wuxuu ka mid yahay musharixiinta sida gaar ah loogu fududeeyay inay ergooyinka u codaynaya soo xulaan. musharax iyo Suldaanka Beesha yibraha Axmed Jaamac loo ogolaaday inay gudaha u galaan goobtii diiwaangalinta ergooyinka iyago hubinayay in ergada la diiwaangalinayaa ay tahay kuwii ay soo xuleen, Waxaa kaloo jiray in isla habeenkii ka horreeyay doorashadda ay isku dayeen inay bedelaan 8 ergay oo ay ka shakiyeen, taasi oo guddigu ay ka diideen.
Maxaa ka dhacay Goobta Codbixinta
Inkastoo Guddiga doorashada, goobjoogayaashii iyo kormeerayaashiii ay isku raaceen in doorashadu ay u dhacday si qurux badan, Hufan, Cadaalad ah iyo amniga oo aad loo adkeeyay, Ergooyinkuna ay si madaxbanaan codkooda u dhiibteen, haddan waxaa goobta doorshada ka socotay ka dhacday dhowr arrimood oo muhiim ah in la suxo.
Doorashadda oo la filayay inay bilaabato 7:00 Subaxnimo waxay dib u dhacday labo saacadood, taasi ay sabab u ahayd ergooyinka qaarkood oo diiday inay galaan hoolka codbixinta iyagoo qaarkood ka cabanayay in ergooyin kale oo saaxiibadooda ah laga reebay codaynta, qaarkood ka ashkatoonayay in mushariixinta tartamaya aysan ku jirin kuwo ay taageersanaayeen iyo arrimo kale.
Ergooyinka Qaarkood oo haystay kaarkii aqoonsiga codaynta xiligi hore yimid maalintii doorashada, waase loo diiday inay gudaha u soo galaan hoolka codbixinta, iyadoo loo sheegay in lagu bedelay ergooyin kale oo ay soo xuleen isimadii iyo Nabadoonadii beelaha ay ka soo jeedaan, taasi oo buuq badan ka dhalisay bannaan hoolasha codaynta, hase yeeshee markii xoog ayaa lagu kala eryayay,waxayna dib ugu laabteen magaaladda.
Arrimahaasi waxay guddigu ku khasbeen in wax ka bedelaan sidii ay u kala horreeyeen Ergooyinka beelaha codaynayay, iyagoo hadba beeshii diyaar ah ku xaraynayay Hoolka si ay u codeeyaan. sida uu qorshuhu ahaana 12 Xildhibaan ayaa loo codayn lahaa, hase yeeshee labo xildhbiaan ayaa maalintii labaad la doortay.
Dhacooyinka kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa, iyadoo codbixintu socoto ayaa waxaa weerar ku soo qaady Xarunta Jaamacadda bariga afrika oo doorashada ka socotay koox dablay ah oo xoog ku dhacday Baabuur nooca Xabadu karin oo dowladu lahayd oo uu isticmaali jiray Taliyaha Ciidanka Ilaada Madaxtooyadda. Dhacdadaasi waxay sababtay in ergadii ku jirtay Hoolka kowaad ee jaamacadu ay ka soo yaacaan hoolka, yimaadaan hoolkii labaad oo gudaha ku yaalay, waxayna arrintaasi soo afjarantay markii kooxdii dablaydu ay la tageen baabuurkii, rasaastiina ay joogsatay.
Arrin Ugub ah
Waxaa kaloo, hoolka doorashadda ka dhacday arrin ugub ah oo ahayd,markii mid ka mid ah ergadii dooranaysay musharixiinta uu la soo baxay kaarka aqoonsiga ergayga oo howlwadeenadii Doorashadu ay u sheegeen inuusan kaarkan ku codayn karin, madaama Kaarku uu isagu lahayn, hase yeeshee guddiga doorashadda ayaa soo dhexgalay waxay ku qanciyeen howlwadeenadii in khald dhacay , balse magacan kaarka ku qoran uu yahay magaciisa, waxaana loo ogolaaday inuu codeeyo.
Lacagaha Lakala Qaatay.
Si dhab ah looma oga cadadka tiradda lacagta ee loo qaybiyay Ergooyinkii codaynay doorahsada, hase yeeshee waxaa markhaati ma doonto ahay din lacag tiro badan ay musharixiintu ku bixiyeen in loo doorto Aqalka hoose, iyadoo lacagta ugu badan la kala qaatay Habeenkii ka horreeyay maalintii doorashadu dhacday.
Musharixiinta Qaarkood ee codadka tirada ku soo baxay waxay bixiyeen lacag u dhaxaysa $5000 ilaa $8000 dollar oo lacagta, taasi oo la siiyay dhammaan ergooyinka ama qayb ka mid ah,sidoo kale qaybtood ayaa bixiyay $3000 ilaa $4000 dollar. Waxaa kaloo ka mid ah musharixiin bixiyay 1500-2500 Dollar, iyadoo ay ku xiran tahay haddba ergooyinka aad u baahan tahay tiradooda.
Musharixiintii looga adkaatay tartanka qaarkood ayaa maalintii xigtay doorashadda waxay bilaabeen inay dib ula soo laabtaan lacagihii laaluush ahaanta looga qaatay, taasi oo keentay in bartamaha Garoowe lagu arko Musharax laga adkaaday iyo Ergaygii u codaynayay oo dagaalamaya.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Khaliif Aw-cali iyo Siciid Qorsheel
Nidaamkan cusub oo la sheegay in cod xanbaarayaal ay wax dooranayaan ayaa la si weydiinayaa faa’iida uu soo jiidey oo aan ka ahayn in musuq-maasuqu gaarey heer aan horayba loo arag, kala shakin, beelaha oo is nacay iyo mushkilado kale.
Dadka qaarkiis ayaa qaba in aysan wax u dhaceen sida wax u dhaceen haddii beeskasta magaaladeeda ku soo doorran lahayd iyaduna samaysan lahayd guddigeeda doorashada, maadaama guddiga doorashada ee siyaasiyiintu magacaabeen ee hadda jiraa uu noqdey mid jeebabka ka buuxsadey lacagta Musharixiinta ee ergooyinka isdaba marinaaya.
W/D: Cumar Siciid